Soo -saaraha iyo Alaab -bixiyaha Dhalashada Shiinaha ee Tapered Tepered | Lixin
Dhalashada duubista duuban ayaa guud ahaan loo adeegsadaa in lagu taageero culeyska la isku daray oo inta badan ka kooban cillad radial. Koobabkoodu waa kuwo loo kala sooci karo si sahlan loo soo ururin karo. Inta lagu jiro kor -u -qaadista iyo adeegsiga, ka -soo -baxa radial -ka iyo oggolaanshaha axial waa la hagaajin karaa oo horay loo sii rakibay ayaa la samayn karaa.
Raadinta duubista ee duuban ayaa si gaar ah loogu talagalay in lagu maareeyo culayska riixitaanka iyo shucaaca ee usha wareegsan iyo guryaha.
Duubista duubista ee duuban waxaa loogu talagalay in lagu qaado culayska riixitaanka iyo shucaaca labadaba waxayna ka kooban tahay afar qaybood: koorta, ama giraanta gudaha; koobka, ama faraantiga dibadda; rollers -ka duuban, ama walxaha duuban; iyo qafiska, ama hayaha roogga.
Duubista duuban ee duuban waxay inta badan siddaa shucaac, culeys isku -dhafan oo isku -dhafan oo leh culeyska radial ee ugu weyn. Awoodda xamuulka xamuulka ah waxay kuxirantahay xagal taabashada ee wadada giraanta dibadda. Xaglaha xidhiidhka oo sii weynaada, baaxaddiisu weynaan doontaa
Iyada oo xagalku u dhexeeyo generatrix -ka dibedda ee tartanka iyo xarriiqda, xambaarku wuxuu xambaari karaa culeys culus iyo waxyaalo kale oo duuban oo duuban, wuxuu inta badan xambaarsan yahay culeys wadajir ah oo ku saleysan hal dhinac oo culeys axial ah, laakiin ma aha oo keliya culeyska shucaaca.
Muraayadaha duubista ee duuban ayaa duubtay waddooyinkii giraanta giraanta gudaha iyo dibaddaba, Roodhiga duuban wuxuu dhexda kaga yaal labada dariiqyada tartanka. Calaamadaha noocan ah badiyaa waa la kala sooci karaa, kuwaas oo kala ah hayaha, giraanta gudaha iyo giraanta dibadda ayaa lagu rakibi karaa gooni. Waxay u adkeysan karaan culeyska jihada shucaaca iyo culeyska axial qaarkood. Waxaa loogu talagalay cabbirro iyo qaabab kala duwan si ay ula kulmaan dhammaan noocyada hawlaha.
Fiiro gaar ah: Kani waa uun nambarka moodeelka qayb yar oo ka mid ah tiirarka duuban ee la duubay ee aan haysanno, haddii aad ku guuldareysato inaad hesho midka aad u baahan tahay, fadlan si toos ah noola soo xiriir. Waad ku mahadsan tahay horay.
Raadiyaha duubista ee duubka ah ayaa si ballaaran loogu dabaqaa qalabka mashiinka, cutubyada dhimista maareynta, transaxles -ka gawaarida, gudbinta, dhagaxa rogista, macdanta, warshadaha biraha, mashiinnada caagga ah, qalabka guriga, matoorrada korontada, bambooyin, mashiinno iyo qaybaha kale ee baabuurta.
Hore: Deep jeexdin Ball dhalista
Xiga: Kubbadda Dhalada
30208 Taper rullaluistemadka Taper
30306 dhalista rullaluistemadka Taper
Row Double Taper rullaluistemadka rullaluistemadka
Afar Row Taper rullaluistemadka dhalista
H62 Kubadda Naxaasta, Kubadaha Copper -ka Yar, Madax Ball Check naxaas, Kubadda naxaasta ee H65, Kubbadda Naxaasta ee Adag, Kubadda naxaasta,